शुक्रवार, श्रावण २३, २०७७ ०४:०३:०४ युनिकोड
मंगलबार, श्रावण ६, २०७७ रमेश बस्ताकोटी
नेपालमा मात्र नभई सारा विश्वमानै उच्च छवि बनाएका एक महान् राजनितिज्ञ हुन् विपि कोईराला , नेपाली काँग्रेस पार्टीका सस्थापक नेता विपि कोईराला आफ्नो जिवनभर प्रजातन्त्रका लागि लडिरहे । विपिको आर्दश , बिचार र सिद्धान्त आजको दिनमा पनि उतिकै सान्र्दभिक छ । एक दुरदर्शी नेता विपि कोईरालाको साउन ६ गते परेको स्मृति दिवसका अबसरमा केहि नलेखि बस्न मनले मानेन त्यसकारण विपि , म आफै र काँग्रेसका बारे केहि लेख्ने प्रयास गरेको छु ।
यो लेख पढ्ने जो कोहिले विपिबारे बुझेका छैनन् भन्ने मेरो मनशाय होईन तर पनि यसले विपिलाइ बुझ्न केहि न केहि सहयोग पुग्दछ भन्ने कुरामा म विश्वास व्यक्त गर्दछु । विपिबारे सानैदेखि धेरै कुरा पढ्दै आईयो , उनि बहुमुखी प्रतिभाका धनी हुन् । नेपाली साहित्यको श्रीबृद्धीमा विश्वेश्वर प्रसाद कोईरालाको योगदान अतुलनीय छ । यो कुरा यहाँ उल्लेख गरिरहनु परेन । मैले यो लेख मार्फत् विपिका राजनैतिक जिवन र उनका प्रेरणादायी कुराहरुलाइ प्रकाश पार्ने प्रयास गरेको छु ।
हामी सानो नै हुँदा विपि बारे प्रसस्त किस्साहरु सुनिन्थ्यो , विपि यस्ता थिए उस्ता थिए भनेर स्कुलमा सर हरुले सुनाइरहन्थे , हामी बुझ्ने भएर स्कुल पढ्न थाल्दा नेपालमा प्रजातनत्र आइसकेको अबस्था थियो । त्यसकारणले पनि विपि संग संगै हिंडेका विपिलाई नजिकबाट चिनेका र विपि बिचारबाट अत्यन्त प्रभावित शिक्षकहरुले हामीलाई पढाउँदा विपि र उनका बिचारहरुबारे भनिररहन्थे । त्यसकारण विपि प्रति सानैदेखि सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । कक्षा उक्लदै गर्दा विपिबारे पढ्न पाईयो । विपिका राजनैतिक जिवन , उनका सिद्धान्त र बिचारहरुबारे अध्ययन गर्न थालियो । स्कुले जिवनमानै विपिलाई प्रसस्त पढियो । सानैदेखि पढ्ने लेख्ने कुरामा रुची भएका कारण म पढी सकेपछि त्यसको सारांश तयार गर्थे र अरुलाइ पनि सुनाउँथे । त्यो मेरो सानैदेखिको बानी हो र अहिले सम्म पनि कायमै छ ।
सानैमा पढें मोहन समशेर र विपि बिच भएका संवादका कुरा जहाँ मोहनसमशेरले विपिलाई प्रधानमन्त्री भएपछि सोधेका हुन्छन् ,“ विपि अब तँपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो , तँपाईको उदेश्य के छ ? विपिले सरल उत्तर दिएका थिए ,“ म एउटा मध्ययम बर्गीय परिवारको मान्छे हुँ , बिहान बेलुका खान हामीलाई दुःख छैन । मेरो अलिकति खेत पनि छ , त्यहीबाट गुजारा हुन्छ , मेरो अबको उदेश्य भनेको हरेक नेपालीलाई मेरै हैसियतमा पु¥याउँने हो ।” विपिको यस्तो बिचार सानैमा पढेको थिए मैले । जुन आज सम्म पनि मनमा अमिट छाप बनेर बसेको छ । यस्ता अनेकौ कुराहरु विपिका बारेमा पढिन्थ्यो , सुनिन्थ्यो , विपिका बारेमा अग्रजहरुबाट बुझिन्थ्यो । त्यसकारण त्यतीबेलाको मेरो बाल मस्तिष्कबाटनै विपि बिचार र सिद्धान्त प्रति झुकाव बढेको थियो । त्यसकारण पनि सानैबाट ( स्कुले जिवन देखिनै ) विपि बिचारप्रति झुकाव बढ्न थाल्यो । अहिले पनि बिपिको त्यो बिचार छाडिएको छैन । विपिकै आर्दश र सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिएको छ ।
हामीले आत्मकथामा विपिलाई पढ्यौं , सुन्दरीजलमा विपिलाई पढ्यौं , विपिका अन्र्तवार्ताहरु पढ्यौं , विपिका लेखहरु पढ्यौं , विपिबारेका बिचार गोष्ठीहरुमा सहभागी भएर विपिलाई सुन्यौं । मेरो बा , हजुरबा ले रुखमा भोट हाल्थे भनेर म रुखमा भोट हाल्ने भएको होईन , विपिलाई पढेर बुझेर विपिका आर्दश सिद्धान्त र बिचार मन परेर रुखलाई भोट हाल्ने भएको हुँ । त्यसकारण मलाई अहिले रुखमा भोट हाल्ने बनाउनुमा कसैको योगदान छैन , म यो ढुक्क संग भन्न सक्छु । म रुखमा भोट हाल्ने हुनुको पछाडी एउटै कारण छ त्यो हो विपि बिचार जसलाई मैले गहिरो संग अध्ययन गरें ।
विपि बारेको एउटा प्रसंग करिव ५ बर्ष पहिले कान्तिपुर प्रकाशनको नेपाल म्यागाजिनमा प्रकाशित भएको थियो । त्यो मैले पढ्ने अबसर पाएको थिंए । कुरा के थियो भने तत्कालीन सोभियत संघको अफगानिस्तानमाथि हमला, इन्डोनेसियामा साम्यवादी दलले ‘एडिट फर्मुला’ अन्तर्गत सुकार्नोको सत्तापलट गर्ने असफल प्रयास, भारतमा सिक्किमको विलय, भारतमा बढ्दो सोभियत प्रभाव तथा दरबारमा ‘रोयल कम्युनिस्ट’को झाँगिँदो उपस्थितिको विश्लेषण गर्दै बीपीले ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’को नीति अख्तियार गरे । र, ०३३ सालमा नेपाल फर्किने तयारी गर्न थाले । बीपीको त्यो निर्णय भारतिय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका लागि स्तब्ध पार्ने खालको थियो । इन्दिराको विश्लेषण थियो, आफ्नो देशमा ज्यानको सजाय बोकेको मान्छे, यति सजिलै, त्यो पनि दरबारसँग कुरा नमिलाईकन कसरी जान सक्छ ? पूर्वकांग्रेस नेता बद्रीनारायण बस्नेत भन्छन्, “इन्दिराको त्यस बेलाको फर्मुला बेलायतीहरूको जस्तै थियो, फुटाऊ र राज गर । बीपीलाई देखाएर दरबारलाई तर्साउने । दरबार देखाएर बीपीलाई । दरबार पनि चिनियाँ कार्ड देखाएर इन्दिरालाई बेलाबेलामा तर्साउँथ्यो ।”
बीपी नेपाल फर्किएपछि दरबारलाई तर्साउन इन्दिरासँग कुनै कार्ड नहुने भयो । त्यसैले उनले भारतीय कांग्रेसका अध्यक्ष देवकान्त बरुवालाई बीपीकहाँ पठाइन् । आसामका बरुवा बीएचयूमा पढ्दैताका बीपीका मिल्ने साथी थिए । ‘इन्दिरा इज इन्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा’को नारा दिँदै इन्दिराको आशीर्वाद पाएका बरुवाले बीपीलाई फकाउने अनगिन्ती प्रयास नगरेका होइनन् । बस्नेत सम्झन्छन्, “तर, बीपीले महारानी मान्नुभन्दा आफ्नै देशको राजा मान्छु भन्दै इन्दिराको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।
तत्कालिन भारतकी शक्तीशाली प्रधानमन्त्री ईन्दिरा गान्धीका प्रस्तावलाई ठाडै अस्विकार गर्ने हैसियत राख्थे विपि , उनीसंग हरेक कुरामा सवाल जवाफ गर्न सक्थे विपि , त्यो थियो त्यो बेलाको विपिको राजनैतिक उचाई , यसले आजका दिनमा पनि म तिनै विपिका आर्दश मुल्य मान्यता , निति र सिद्धान्तलाई मान्ने मान्छे हुँ भन्दा गर्वले छाती फुल्छ ।
ईन्दिराकै देशमा बसेर लोकतन्त्रको हत्या गर्दै ‘इमर्जेन्सी’ लगाउने इन्दिराको निर्णयलाई बीपी ‘प्रजातन्त्रमार्फत फासिस्टवाद’तर्फ उन्मुख बताउँथे । त्यसैले उनले धेरै ठाउँमा लेखेका पनि छन्, ‘भारत अब ठूलो जेल भयो । सानो जेल नेपालमै फर्किन्छु ।’ बनारसस्थित मामुरगन्जको निरालानगर कोलोनीमा बस्दा बीपीले भनेका कुरा बीएचयूका प्राफेसर सिंह अझै सम्झन्छन् । भन्छन्, “इमर्जेन्सीपछि भारत पनि जेल भइसक्यो । तर, हाम्रो जेल सानो छ, त्यहीँ जान्छु । नभन्दै विपि मेलमिलापको निति लिएर नेपाल फर्कीए र लगत्तै जेल पनि परे ।
विपि बारे अर्को एक प्रसङ्ग पनि त्यहाँ उल्लेख गरिएको छ , त्यो के थियो भने बीपी प्रधानमन्त्री हुँदै सीमानजिकै चिनियाँ सेनाको गोलीले नेपाल पुलिसका एक हबलदार बमबहादुर मारिए । त्यतिबेला भारतिय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुले कडा वक्तव्य दिए, ‘हाम्रो उत्तरी हिमालयन सीमामा जुन हमला भयो, त्यसलाई हिन्दुस्तानले आफूमाथि भएको हमला ठान्छ ।’
तर, बीपीलाई सार्वभौम राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेहरुको त्यो प्रतिक्रिया मन परेन । उनले भोलिपल्टै नेपाली संसद्बाट नेहरुलाई प्रत्युत्तर दिए, ‘उत्तरी सीमामा जुन घटना भयो, यसप्रति हिन्दुस्तानले जुन प्रतिक्रिया जनायो, हामी भन्न चाहन्छौ, हाम्रो भूभागको रक्षा गर्न हामी सक्षम छौँ ।’ पछि भारतीय राजधानी नयाँदिल्लीमा पत्रकारहरूले बीपीको प्रत्युत्तरका विषयमा नेहरुलाई सोधेका थिए । नेहरुले जवाफ दिए, ‘बीपीले भनेको ठीक हो ।’ यो घटनामा चीनले आफ्नो गल्ती स्वीकार्दै मारिने पुलिसका परिवारलाई नेपाल सरकारमार्फत ५० हजार रुपियाँ प्रदान गरेको थियो, जुन पछि महेन्द्रलाई विदेशी राष्ट्रमाझ बीपी चीनतर्फ ढल्किँदै गएको ‘प्रोपोगान्डा’ गर्न सजिलो भयो ।
यसरी राष्ट्रियताको सवालमा विपिको अडान अविचलित थियो । उनी कुनै पनि दृष्टकिोणबाट भारत या चिनले नेपाललाई हेपेको मन पराउदैनथे र तत्काल प्रतिक्रिया जनाईहाल्थे , तत्कालिन भारतिय र चिनका शाशकहरु विपि संग यसकारण डराउँथे की विपिले बिस्तारै आफ्नो छवि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा एक ख्यातप्रिाप्त राजनेताको रुपमा स्थापित गर्दै लगेका थिए ।
नेपाल र नेपालीका लागि विपिले थुप्रै बिचार , निति र सिद्धान्तहरु छाडेर जानुभएको छ । जुन निति अहिले पनि उतिकै सान्र्दभिक छ , ति नितिहरु अहिले लागु गर्न सकियो भने मात्र देशको कायापलट हुन्छ । तर विडम्वना आज सान्दाजुको पुण्य स्मृति दिवसमा यो भन्न करै लाग्छ , उनले जिवनभर प्रजातन्त्रका लागि भन्दै लडेर स्थापना गरेको पार्टी नेपाली काँग्रेसले त सान्दाजुका कुरा लागु गर्न सकेन , चाहेन अरुको के कुरा गर्नु । आज काँग्रेस विपिलाई बेच्छ मात्र , तर विपिका आर्दश , सिद्धान्त र बिचारहरुलाई व्यवहारमा लागु गर्दैन । यसले विपिका अनुयायीहरुलाइृ ठुलो चोट पुगेको छ । काँग्रेस प्रजातन्त्र स्थापना पछि लामो समय सत्तामा बस्यो त्यतीबेला उसले न विपि सम्झियो न त विपिका बिचार सिद्धान्त र आर्दशहरुनै सम्झियो । जसले गर्दा देशमा काँग्रेसको लोकप्रियता क्रमश घट्दै गयो । र काँग्रेस आजको हालतमा पुगेको छ । विपिका आफ्नै भाई भतिजा यो देशका प्रधानमन्त्री पटक पटक भए , उनकै शिष्य शेरबहादुर पटक पटक प्रधानमन्त्री भए , अहिले काँग्रेसको सभापति छन् । विपिकै कान्छो छोरा डा शशांक कोईराला अहिले काँग्रेसका महामन्त्री छन् । तर पनि काँग्रेसको नेतृत्व तहले कहिल्यै नेपाली राजनितिमा र सत्ता संचालनमा विपि बिचार र निति लागु गर्न सकेन । यसले विपिको अनुयायीहरुलाइ त चोट परेको छ नै स्वयम् सान्दाजुको आत्मा समेत पक्कै पनि खुशी भएको छैन होला ।
बर्षको एक दुई दिन विपिलाई सम्झिएर चर्को भाषण गर्ने , उनकै आदर्शको बाटोमा हिड्ने प्रण गर्ने तर भाषण गरेको ५ मिनेटमानै सबै कुरा भुल्ने काँग्रेस नेतृत्वको प्रवृत्तिनै समस्याको मुल जड हो । काँग्रेसले अब पनि बोलीमा मात्र होईन व्यवहारमानै विपिको सिद्धान्त अंगिकार गर्न सकेन भने काँग्रेस फेरी पनि वामपुड्के हुँदै जानेमा दुईमत नै छ । यही सन्र्दभमा स्वयम् विपिले भनेको एउटा भनाइ स्मरण हुन्छ , एक दिन एकजना कार्यकर्ताले विपिलाई सोधेछन् , सान्दाजु प्रजातन्त्र आएपछि हामी जस्ता कार्यकर्तालाई के हुन्छ , विपिले भनेछन् , प्रजातन्त्र आएपछि एकपटक फेरी पार्टी भित्र सुकिला मुकिलाहरु हावी हुन्छन् , तिनले आर्दश बिर्सन्छन् , त्यस्ताहरुका बिरुद्ध पार्टी भित्रै फेरी तिमि जस्ता कार्यकर्ताहरुले संघर्ष गर्नुपर्दछ । विपि कति दुरदर्शी थिए भन्ने यही कुराले पुष्टी गर्छ , नभन्दै प्रजातन्त्र आएपछि त्यस्तै भयो , विपिका आर्दश र सिद्धान्तहरु बिर्सिन थालियो र सुकिला मुकिलाहरु हावी भए । तर ईमान्दार कार्यकर्ताहरुले अझै तिनिहरु बिरुद्ध संघर्ष गरेका छैनन् । अति हुँदै गयो भने एक दिन त्यो पनि अबश्य हुन्छ । त्यसकारण काँग्रेस नेतृत्वले यसबारेमा बेलैमा सोचोस् ।
विपि व्यक्ती मात्र नभएर बिचार र सिद्धान्त हो तसर्थ विपिलाई अब काँग्रेसले व्यवहारमानै अवलम्वन गर्न आबश्यक छ । आफु पनि केहि नयाँ दिन नसक्ने अनि ७० बर्ष पहिले विपिले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाइ पनि व्यवबहारमा अवलम्बन नगर्ला काँग्रेस नेतृत्व चक्रव्युहमा फसेको छ । चक्रव्युहबाट निस्कने एकमात्र सुत्र विपिकै आर्दश निति र सिद्धान्त हो । यसलाइ तुरुन्त व्यवहारमानै अबलम्बन गर्न एक पटक सबै इमान्दार काँग्रेसीहरुले नेतृत्वलाई दवाव दिन आबश्यक छ ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, श्रावण ६, २०७७, ०३:१०:००